Project- Asturnaanta Dukumiintiyada Gaarka ah
Yaa sameynaya ra'yi uruurinta?
Haddii ay dhacdo isku dhac u dhexeeya shuruudaha Dukumiintiyada Gaarka ah ee hoos ku qoran iyo shuruudaha RSG siyaasada asturtnaanta, shuruudaha ku jira Dukumiintiyada Gaarka ah ee Mashruucan hoose ayaa xukumi doona.
RSG waxay ubaahantahay inay uruuriso oo ay u adeegsato macluumaadka shaqsiyeed ee gaarka ah adiga ra'yi uruurintan, oo ay kujiraan:
Macluumaadka safarka – tusaale ahaan, macluumaadka ku saabsan safarada aad gasho oo ay ku jiraan meelaha saxda ah, waqtiyada safarka, iyo habka safarka.
Dadweynaha & ndash; tusaale ahaan, jinsiyada, isirka, iyo dakhliga reerka si loo hubiyo in tusaalaha ra'yi uruurinta uu ka tarjumayo bulshada daraasada gobolka.
Qurxinta gurigaaga – tusaale ahaan, yaa ka tirsan qoyskaaga iyo xiriirka aad la leedahay xubnahan reerka ah oo ay ku jiraan xaaladda guurka iyo aqoonsiga lab iyo dhedig ee adiga iyo saygaaga/lamaanahaaga.
Macluumaadka xiriirka – tusaale ahaan, cinwaanka iimaylka ama lambarka taleefanka laga leeyahay ujeeddooyinka in laguu soo diro xusuusin ra'yi uruurin iyo qaybinta kaararka hadiyadda.
Dejinta kombiyuutarka & ndash; tusaale ahaan cabbirka shaashadda si loo wanaajiyo aaladdaada ra'yi uruurinta, cinwaanka IP-ga kumbuyuutarkaaga iyo fiilada wakiilka isticmaalaha si loo garto aaladdaada marka aad la falgalayso ra'yi uruurinta.
RSG waxaa ka go'an ilaalinta sirta, sharafta, iyo amniga macluumaadkaaga shaqsiyeed. Ma siideyn doonno ama lama wadaagi doonno macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa soo aruurinno marka laga reebo sida sharcigu farayo ama lagu sharraxay Mashruucan Gaarka ah ee Diiwaangelinta iyo siyaasadeena gaarka ah.
Sideen u isticmaaleynaa xogtaan?
RSG iyo Metropolitan Council waxay u isticmaali doonaan xogtaada inay:
Fahmaan qaababka safarka ee gobolka iyo caadooyinka.
Ka caawiyaan Metropolitan Council soo-jeedinta maal-galinta gaadiidka wax-ku-oolka ah iyo mudnaanta siinta hagaajinta ugu habboon baahiyaha Magaalooyinka Mataanaha ah.
Kaala soo xiriiri doonaa heerka ra'yi uruurintaada oo ay ku siinayaa taageero.
Kuula soo xiriiri doono si ay kuu siiyaan dhiirigelin maaliyadeed oo dhammaystir ah (haddii ay khuseyso).
U oggolaadaan Metropolitan Council markay codsadaan inay bixiyaan nooc ka mid ah daraasadda xogta halkaas oo dhammaan macluumaadka gaarka ah laga saaray.
Yaan la wadaagnaa xogtaan?
RSG waxay macluumaadkaaga la wadaagi doontaa:
Bixiyaha iimayl ee softiweerka otomaatiga ah si loogu soo diro iimayllada ra'yi uruurintan
Xarun wicitaan si ay u fuliso taageerada sahanka
Shirkad daabacan si ay u daabacdo una dirto qalabka ra’yi uruurinta
Iibiyaha kaarka hadiyadaha ah inuu soo saaro kaararka hadiyada ee dhameystirka ra'yi uruurinta
Shirkad xiriir la leh bulshada iyo shirkad ka shaqeysa bulshada si loo taageero kaqeybgalka daraasadda
Shirkad la-talin si ay u taageerto dadaallada ka-qaybgalka bulshada iyo falanqaynta xogta
Sirta asturnaanta RSG ma khuseeyo dhaqamada shirkadaha aannan laheyn ama aan xakamaynayno, ama shaqsiyaadka aanaan shaqaalayn ama maamulin.
Waa maxay dhiirigelinta dhaqaale ee la bixiyo si loo bixiyo macluumaadkan?
Markaad dhammaystirto dhammaan sahamintan, RSG waxay ku siin doontaa shahaado hadiyad ah oo lagu qiimeeyay $10 - $25, iyadoo kuxiran sida aad u dhammaystirto aaladda cilmi-baarista, macluumaadka yar ee khuseeya kooxdaada dadka, iyo mudnaanta Metropolitan Council. Abaalmarintani waxay ka dhigan tahay qiyaasta niyad-wanaagga ee RSG ee qiimaha macluumaadkaaga ee Metropolitan Council, sida loo xisaabiyey iyadoo la adeegsanayo caddeyn taariikhi ah oo la xiriirta qiimaha xogta sahanno la mid ah, iyo miisaaniyadda uu macmiilku noo siiyay mashruucan .
Fadlan eeg qaybta VIII ee Siyaasada Asturnaanteena wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan dhiirigelinta maaliyadeed ee RSG.
Dhinacyada kor ku xusan waxay isku raaceen in kaqeybgalayaasha mashruuc kastaa ay yihiin mutadawiciin, oo si xor ah uga qayb qaadashadooda, cadaadis ama qasab la'aan, iyo balanqaad la'aan ama aan laga sugaynin magdhaw RSG.
Ma beddeli kartaa maskaxdaada?
Haa. Waad ka saari kartaa ogolaanshahaaga ama waxaad isticmaali kartaa xuquuqdaada xogta adiga ku soo gudbinta Codsiga Asturnaanta Xogta nidaamkayaga aaminka ah.
© 2022, Resource Systems Group, Inc. loogu talagalay Metropolitan Council